4 Waxyaabood Oo Hadaad Ninka U Sameyso Kuu Sahli Doona Inuu Si Daran Kuusii Jeclaado - Aayaha
4 Waxyaabood Oo Hadaad Ninka U Sameyso Kuu Sahli Doona Inuu Si Daran Kuusii Jeclaado
Foos Omar FantasticNovember 8, 2020
Ma raadineysaa habab fudud oo wali waxtar leh oo jaceyl aad ugu muujin karto ninkaaga adigana aad ku hananeyso qalbigiisa.
Raggu waxay mudanyihiin jaceyl, daryeel iyo in laga fekero baahiyahooda.
Hoos ka akhriso talooyin qiimo leh oo ku caawin doona.
1. Cagaha u duug
Inaad ninkaaga cagaha u riix riixdo ama u duugto uma baahna inaad khabiir ku noqotid sameynteeda.
Ninkani waa saaxiibkaaga ugu fiican iyo seygaaga maadaama aad rabtid inuu aad kuu jeclaado isla markaana aad hanato qalbigiisa, waxaa hubaal ah inuu aad ku jeclaanayo isla markaana si wanaagsan kuula dhaqmayo.
Cashada kadib, markaad labadiinuba daawaneysaan telefishinka, uga yaabso inaad cagaha u riix riixdo ama aad u duugto.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in ragga ay dumarka oo kale jecelyihiin in la qadariyo iyo in la amaano. Markasta oo ay suurtagal tahay, muuji sida aad u ixtiraamto, u jeceshahay una qiimeyso isaga. Tusaale ahaan, ku bogaadi waxa uu xidhan yahay, sida uu isku carfiyo ama shaqada maalintaas uusoo qabtay.
Natiijo ahaan, wuu ka jawaabi doonaa bogaadintaada waxayna ficilladaan xoojin doonaan xiriirkaaga. Iskusoo wada duuboo, daacad noqo.
3. Udir fariimo qoraaleedyo
Marnaba yeysan ku dhaafin maalin adigoo fariimo qoraal macaan u dirin. Xitaa haddii uu mashquul ku yahay kulamo ama howlo kale maalinta oo dhan, wali udir fariimo adigoo ku odhanaya waan kaa fikirayaa maxaa yeelay jacayl xad dhaaf ah ayuu kuu sii qaadayaa.
4. Usheeg inaad jeceshahay
Dadka qaar waxay dhahaan waa inaadan waligaa ka badbadinin ereyada “waan ku jeclahay,” laakiin taasi waa wax aan jirin. Xaqiiqdu waxay tahay, qof kastaa wuxuu rabaa inuu maqlo saddexdaas eray ee yaryar oo waxay rabaan inay si joogto ah u dhagaystaan.
Runtii waa wax fudud oo uma baahnid inaad jabiso bangiga si aad qof ugu muujiso inaad jeceshahay.
Erayo jaceyl ayaa ah waxa ugu sahlan oo la isku dhaho qalbiyadana ay u baahanyihiin.
Waad Noqon Kartaa Seeyga/Xaaska Ugu Wanaagsan Dunida… Qaado Talooyinkaan